Roscón de Reyes vita amin'ny mofomamy sponjy - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Roscón de Reyes natao tamin'ny mofomamy sponjy
tsindrin-tsakafo100 minitraOlona 8340 kaloria
ny Alicia tomero
Raha tsy tianao ny koba nentim-paharazana Roscón de Reyes, ity misy dikan-teny tianao. Nanao roscones mahatsikaiky natao tamin'ny mofomamy misy ranom-boankazo misy amandy voatoto izahay.
Tsindrin-tsakafo iray hafa ny fahafahana manompo amin'ity fialantsasatra ity tsy misy fahasarotana, zavatra tena vita an-trano sy nentim-paharazana. Tsy azonao adino ny voankazo mamy, amandy ary glasy mba hahatonga azy ho be ranony.
Raha tianao ny manao mofomamy kely Ity dia fomba azo antoka ahafahana manao izany amin'ny fomba tena tsotra. Raha te hahita azy tsikelikely ianao dia afaka mijery ny horonan-tsarimihetsika.
1 Roscón de Reyes natao tamin'ny mofomamy sponjy
Roscón de Reyes ho an'ity Krismasy ity vita amin'ny mofomamy sponjy ary miaraka amin'ny haingo tsotra amin'ny voankazo mamy, glasy mamy ary almonds voatetika.
Fotoana fiomanana: 1H
Fotoana hiketrehana: 40M
Fotoana manontolo: 1h 40M
100 g ny lafarinina varimbazaha
125 g ny amandy voatetika
1 sachet ny masirasira maina na 15 g
150 g ny dibera, malefaka na antonony levona
Atody 3 L
Ny zitran'ny voasarimakirana iray
Zest ny voasary kely
Ny ranom-boasary kely iray
Yaourt voajanahary 125 g
Siram-boasary 150 g
1 tablespoon Philadelphia karazana crème fromazy
Ronono iray sotro fihinanana 3 sotro fihinanana
Voankazo miloko mena sy maitso
Amandy voakodia eran-tanan-droa
Siramamy madinidinika kely
Manafana ny lafaoro izahay amin'ny 180 °. Ao amin'ny vera Thermomix dia ampianay ny 125 g ny dibera miempo, ny siramamy 160 g ary ny zest amin'ny voasarimakirana ary ny voasary. Mandamina izany izahay mandritra ny 15 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3.
Manohy manampy ny atody 3 izahay, ny ranom-boasary kely iray, 125 g ny yaourt voajanahary ary manao fandaharana indray izahay. 15 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3.
Amin'ny farany dia ampiana 125 g ny amygdala voapoizina, ny lafarinina varimbazaha 100 g ary ny vovobony 15 g. Afangaroy amin'ny fandaharana mandritra ny 1 minitra amin'ny hafainganam-pandehan'ny fametahana.
Mametraka azy ao anaty lafaoro izahay amin'ny haavony antonony, miaraka amin'ny hafanana miakatra sy midina. Avelantsika hanendasany eo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 20 minitra raha lasitra kely. Ao amin'ity recipe ity, dia feno lasitra kely roa mirefy 18 sm.
Manadio ny vera isika ary manampy ny siramamy 150 g, ny siramamy sotrokely ary ny ronono manontolo 3 sotro. Manome fandaharam-potoana izahay mandritra izany 10 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3,5.
Rehefa masaka ny mofomamy dia avelantsika hihena ary avelantsika ho lasitra. Mandraraka ny glaze eo ambony isika ary mametraka ny almonds voatetika sy ny voankazo mamy. Azo atao koa ny manampy ny siramamy.
Azonao atao ny mameno an'io roscón io amin'ny crème karavasy, ho mahavariana!
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Postres, Fivarotana mofomamy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Postres » Roscón de Reyes natao tamin'ny mofomamy sponjy
Cookies misy polvorón texture
Arugula sy macadamia pesto